Chine: aretin-tsaina manoloana ny toetry ny Sinoa · Global Voices teny Malagasy
Chine: aretin-tsaina manoloana ny toetry ny Sinoa
Voadika ny 29 Avrily 2009 13:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
Mpikaroka ao amin'ny sampam-pitsaboana mifandraika amin'ny lalàna avy ao amin'ny anjerimanontolon'i Pékin antsoina hoe Sun Dongdong no nilaza tao amin'ny China News Weekly ny 23 martsa lasa teo fa 99% ny Sinoa mpanao fitakiana no marary saina ary tohanany ny fampidirana azy ireo an-terisetra any amin'ny toeram-pitsaboana.
Vaovao farany (ny 08 arpily tamin'ny 08:00): nandroso soson-kevitra ny amin'ny hanafoanan'ny mpamorona sita web ny antso eo amin'ny fidirana sy ny ady hevitra ny mpikarakara internet kanefa kosa tsy hanafoana tanteraka ny lahatsoratra rehetra (via twitpic):
Ny 23 martsa, ny mpikaroka ao amin'ny anjerimanontolon'i Pékin, manam-pahaizana manokana momba ny aretin-tsaina no nilaza tao amin'ny China News Weekly fa “99% ny Sinoa mpanao fitakiana no manana olana ara-tsaina”. Niteraka resa-be avy hatrany ity vaovao ity.
Ny vaovao rehetra sy ny lahatsoratra rehetra mikasika na mandamina na mamoaka vaovao mahakasika ity resaka nataon'ny Sun Dongdong ity dia tsy maintsy fafàna daholo. Tsy voakasik'ity fe-petra ity kosa ny resaka ankapobeny sy ny vaovao. Aoka tsy afangaro ny vaovao mikasika izay tsy antso. Aza hadino izany! Azafady, soniavo handraisanao azy.
Vaovao hafa (ny 08 aprily 2009 tamin'ny 7:30): nisy sera mailaka nanentana hanangona sonia hanerena ny Ministeran'ny Fahasalamana hanafoana ny antom-pijoroan'ny mpikaroka ao amin'ny Sun.
Iza no tena marary saina?
Vaovao farany (08 aprily 2009 tamin'ny 06:30): ny faran'ny herinandro teo dia nivory teo ivelan'ny vavahady antsinanan'ny anjerimanontolon'i Pékin ny mpanao fitakiana sasantsasany avy any Beijing. Naneho ny tsy hafaliany izy ireo. Teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana kanefa tsy nisy ny korontana. Noho izany, iza no tena marary saina? Maneho ny heviny amin'ny alalan'ny fihetsika ireto mpanao fitakiana ireto (picture via 163.com):
Aretin-tsaina manoloana ny toetry ny Sinoa?
Insreto ny teny sasantsasany nataon'ny Sun voarain'ni Gen Wen tao amin'ny China News Weekly:
Ankoatr'ireo mpanao fitakiana efa matihanina dia ambarako etoana fa 99%, raha tsy 100%, no manana olana ara-tsaina – adala sy mikorotan-tsaina avokoa izy rehetra!
Mba hahatonga ny fahadalany ho marina kokoa dia afaka miala ny ankohonany izy ireo ary mandoa ny saran'ny fitakiany. Afaka manao fikarohana lalindalina kokoa ianao amin'ny aretin'ireto mpanao fitakiana ireto, satria ny olana napetrany tany aloha dia efa voavaha ary tsy manana olana intsony izy ireo ankehitriny.
Ny fandefasana azy ireo any amin'ny toeram-pitsaboana ihany no fiarovana azy ireo (amin'ny maha olona azy).
Manondro ny mpitoraka bilaogy fa efa fanavakavahana izao ataon'ny Sun izao. Niombonany tamin'ny olona maro izany hevitra izany ary manery an'ny Sun izy ireo hiala tsiny araka ny hita ao amin'ny chinanews.com ny 6 aprily:
Ny sasany amin'ireo voalazako (amin'ny nolazaiko tao amin'ny magazine) dia tsy mety loatra, ary niteraka tsy fifahazahoan-kevitra sy tsy fifanarahana. Manenina ny amin'ireny aho. Raha nandratra ny sasany amin'ny olona ny zavatra nolazaiko dia mangataka fifonana marina aminareo aho. Ary manantena fa hahazo canal ara-dalàna ireto mpanao fitakiana ireto hamahany ny olany.
Dikan-teny China Digital Times
Hazavao ny hevitrao azafady!
Na izany aza dia tsy mankasitraka ny fifonany ny olona sasany ary mangataka fanazavana ny teniny. Nanoratra taratasy misokatra ho an'ny Sun avy amin'i Weng Yenhai avy any Aizhixing Institute of Health Education any Beijing i Beifeng:
1. Izao ve no fomba firesaka? Raha eritreretinao fa hamoahana ny olana, afaka valabelarinao ve ny hevitrao mikasika ny fifandraisan'ny mpanao fitakiana sy ny aretin-tsaina? Inona no hevitrao manoloana ny mpanao fitakiana, sy ireo efa matihanina? Iza no adala? Inona no tena lalana hitondranao ny mpanao fitakiana? Ary inona no hatao hitsaboanao ireo marary saina? Raha efa nisy zavatra natao hanajanonana ny aretin-tsaina mikiky ireto mpanao fitakiana dia mamela anao aho.
2. Tsy mahatakatra ny tianao hambar ave ny olona? Taiza ho aiza no nandikany vilana ny tianao holazaina?
Ambonin'izany dia liana ny amin'ny toerana raisinao sy ny hevitrao amin'ny maha-matihanina anao amin'ny fitsaboana mifandraika amin'ny lalàna anao ny olona. Aoka tsy holazaina intsony izany amin'ny manaraka. Nadikako tamin'ny antoko seramailaka anankiroa ity taratasy ity.
Ao amin'ny ady hevitra nataon'i Ifeng dia nahitana fanamarihana manodidina ny 9884 mikasika iny resaka Sun iny, indreto ny sasany amin'izany:
Avy any Chongqin nosoratany ny 3 aprily ary notohanana 2705:
Tena marary saina ny Sun Dongdong, fa raha tsy izany tsy nahavita niteniteny foana sy tsy miantra ary milaza zavatra tsy misy fotony tahaka izao?!!! Tena mahamenatra.
Avy any Shandong nosoratany ny 3 aprily ary notohanana 2705:
Aza atao lasibatra ny olona, 99% ny mpanao fitakiana no mangirifiry vokatry ny fanakianana tsy mitombina. Tena mbola mikorontana sady maizina ny fiaraha-monina, indrindra ho an'ny eny ambanivohitra, mbola mampiahiahy ny fitsarana marina. Mahantra ny tsantsaha kanefa manao kolikoky ny governemanta. mampalahelo ny momba azy ary amidin'izy ireo tsy misy indrafo ny tanin'ny tantsaha. raha mbola mitohy ny kolikoly tahaka izany dia tsy hanana fanantenana intsony ny Sinoa…
Avy any Chine navoaka ny 3 aprily notohanana 1760:
Andriamanitra ô!!! Tena mpampianatra biby mihitsy ity ao amin'ny anjerimanontolon'i Pékin ity!!!
Avy any Shenzhen nosoratana ny 3 aprily notohanana 1131:
Nikarakara marary saina marobe ny Sun Dongdong ary ankehitriny dia izy koa no lasa anankiray amin'ireny marary ireny. Lasa lavitra ny olana mikasika ny tsy fitoviana. Fanampin'izany dia mpanao kolikoly tsisy farany ny governemanta. Mahazo faka lalina ny tsy rariny ara-tsosialy indrindra eny amin'ny fototra. Tsy rariny ny fanerena ny olona mpanao fitakiana hiditra eny amin'ny hopitaly raha tsy nahazoana alalana avy amin'ny fianakaviany.
Avy any Jiansu nosoratana ny 3 aprily notohanana 994:
Mampatahotra raha i Chine no manana profesora tahaka izany. araka ny voalazan'ny China Youth ny 12 martsa dia nanambara ny birao mpikarakara ny mpanao fitakiana ao amin'ny polisy fa mitombina ny ankamaroan'ny fitakiana ataon'izy ireo.
Avy any Liaoling nosoratana ny 3 aprily notohanana 948:
Tokony ho ity alika Sun Dongdong ity no hampidirina any amin'ny hopitaly voalohany ary kapohina mandritra ny 3 andro.
Sun ambonin'ny melanine: aza manakorontana
Ankehitriny dia tsy vao sambany ny Sun no mitsangana miaro ny politikan'ny governemanta. Nandritra ny fanapoizinana tamin'ny melanine dia nilaza izy fa tsy misy tsinin'ny governemanta ireny ary nomeny tsiny ny fampahalalam-baovao izay sahy nanakiana ny governamanta tamin'ireny.(via Tianya Sept 2008):
Tsy mahagaga raha voakasik'ity olana ity ny olona. Na izany aza, mila olona mandray andraikitra ny fiarah-monina misy antsika, indraindray dia diso tafahoatra loatra ny ataon'ny fampahalalam-baovao. Ny tena eritreretiny mantsy dia ny valisoany. Heveriko fa tokony hamantatra tsara ny antony aloha isika. Ambonin'izany dia tsy ilaina ny miady amin'ny governemanta. Arakaraky ny halehiben'ny fanakorontanana no mazava ho azy fa mahasarotra ny famahana ny olana.
Nahitana fanamarihana 8255 ity lahatsoratra ity ary ny ankamaroany dia nanakiana ny Sun daholo.